Ganacsiga Shabakadaha Bulshada | Martech Zone
Ganacsiga Shabakadaha Bulshada
Monday, May 11, 2009 Sabtida, Janaayo 21, 2017 Douglas Karr
David Silver, oo ah maal-galiye maal-gashada oo ku takhasusay shabakadaha bulshada, ayaa qoray Qorshaha Ganacsi ee Shabakadda Bulshada: 18 Istaraatijiyad oo Abuuri doona Hanti Weyn. Waxaan ku dhex akhrinayey buugga xiise - maadaama aan ahay aasaasihii Yar Indiana ahna milkiilaha a shabakad bulsheed oo loogu talagalay Veterans Navy.
Labada shabakadood waxay leeyihiin qaab ganacsi iyo ujeedooyin aad u kala duwan. Pat Coyle wuxuu iska leeyahay oo uu ka shaqeeyaa Yaryar Indiana wuxuuna raadinayaa inuu ka faa'iideysto hibada gudaha si uu u dhiso ugu dambayn shabakad - isu keenida hibo, xakameynta maskaxaha maskaxda, taageerida farshaxanka maxalliga ah iyo madadaalada, iyo bixinta xarun loogu talagalay hal-abuurka iyo fikradaha. Waxaa jira tan oo ah karti iyo fursad lagu sii wadi karo dhismaha ka yar Indiana - markaa anigu ma arko qorshe ganacsi oo weli meesha yaal (in kasta oo aan buugga la wadaagayo Pat).
Navy Vets ayaa ku socota wadadii ay ku noqon laheyd shirkad mas'uuliyad xaddidan oo aan faa'iido doon ahayn. Hadafka Navy Vets waa inuu noqdo shabakadda bulshada ugu weyn uguna wanaagsan Halyeeyada Ciidanka Badda Mareykanka. Lacag kasto oo laga sameeyo shabakada waxaa loogu deeqi doonaa samafalayaasha halyeeyada sida ay ugu codeeyaan xubnaheeda. Waxaan rajeynayaa inaan qoro jeegga ugu horreeya dhowaan! Shaki kuma jiro in shabakadu ay nolosha wax ka beddeli doonto itself ayna ka go'i doonto shabakadaha kale ee militariga ee doonaya inay gadaal ka riixdo dhabarka halyeeyadii hore wax badan u siiyay.
Qorshaha Ganacsi ee Shabakadda Bulshada ayaa aragti ka duwan ka dhiibanaya sida shabakadaha bulshada ay lacag u helaan. Marka la soo koobo, awoodda tirooyinka ku dhex jira shabakadda waa in looga faa'iideysto a gudbinta shabakad si ganacsi loogu kaxeeyo shirkadaha. Qiyaas bangi, dukaan, shirkad qareen, iwm iibsanaysa ahaanshaha rasmiga ah [Gali halkan warshadaha] ee Yar Indiana. Taasi waa halka David Silver u arko suurtagalnimada.
Xaqiiqdii iskuma dari karin 18ka istiraatiijiyadood si aan halkaan ugu taxo… Waxaan u maleynayaa inay jiraan wax intaas ka sii badan oo dhab ah. David waxaa ku jira buug dhammaystiran oo ku saabsan helitaanka iyo iibsashada, koritaanka, lacag-bixinta iyo xitaa iibinta shabakaddaada bulshada. Waa la arki doonaa haddii tixraacyada lagu qiimeyn doono $ 600 ilaa $ 1,000 xubin kasta oo uu David ku taageero… milyan shabakadaha Ning iyo boqolaal milyan oo isticmaaleyaal ah… taasi waa lacag aad u badan oo meesha fadhida.
Haddii aad tahay ganacsade dadaal badan oo naftaada u huri kara inaad habeen iyo maalin u shaqeyso sidii aad u kobcin lahayd isku xidhkaaga bulshada - intaas ka dib buuggan aad raadineyso uun buu noqon karaa! Waxaan jeclaan lahaa inaan arko tusaalooyinka dunida dhabta ah ee la socda istiraatiijiyad kasta oo buugga ku jirta. Inta badan, waxay umuuqataa buuggu inuu yahay waxoogaa saadaal ah halkii laga ahaan lahaa qorshe ganacsi.
Xagga saadaasha Daa’uud, in kastoo… anigu waan oggolahay! Awooda shabakada bulshada kuma jirto astaamaha, barmaamijka, tirooyinka… waxay ku jirtaa ku xirnaanshaha shabakada si loogu gudbiyo taraafikada iyo ereyga afka suuqgeynta noocyada casriga ah.
Tags: david lacagxeeladaha warbaahinta bulshadaqorshaha ganacsiga shabakada bulshadaqorshaha ganacsiga shabakada bulshada
Ku lifaaq ololaha Google Analytics Querystring si firfircoon adoo adeegsanaya jQuery
Ayaa Isticmaala Twitter?